Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo cambaareeyey qaraxyadii Muqdisho ee maanta – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa qoraal kasoo baxay xafiiskiisa lagu cambaareeyay labadadii qarax ee maanta ka dhacay agagaarka Golaha Murtida iyo Madadaalada Qaranka (National Theater). Guddoomiye Mursal wuxuu dadkii musiibadaas ku geeriyooday uu Alle uga baryay in Naxriistii jano uu ka waraabiyo, eheladoodana uu samir iyo iiman ka siiyo, uuna kuwii ku dhaawacmay u booga dhayo.
“Anigoo ku hadlaaya magaceyga, kan Guddoonka Golaha iyo sidoo kale kan Xildhibaanada Golaha Shacabka, waxaan cambaareynayaa dhacdooyinkii foosha xumaa ee kooxaha nabad diidka ay maanta ka geysteen magaaladda Muqdisho, gaar ahaan agagaarka Tiyaatarka Qaranka. Dadkii ku geeriyooday Illaahey naxriistiisa haka waraabiyo, kuwii dhaawacmayna caafimaad deg deg ah Allaha siiyo dhamaanteenana samir iyo iimaan Allaha naga wada siiyo” ayuu yiri Guddoomiye Mursal.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka wuxuu uga mahadceliyay hay’adaha ammaanka qaranka dadaalada ay mar walba ugu jiraan ka hortaga wuxuu ugu yeeray “dhagaraha kooxaha argagixisada ah ay la damacsanyihiin shacabka Soomaaliyeed”. Sidoo kale, waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka qaranka, oo mar walba u taagan difaacooda, si loo soo afjaro dhibaatooyinka kooxdan ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay la shaqeeyaan, oo ay garabkooda istaagaan, ciidanka ammaanka, si looga adkaado kooxaha nabad diidka ah ee fikradaha shisheeye ku shaqeeya, mar walbana u taagan daadinta dhiiga shacabka Soomaaliyeed” ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan.
Mooshinka keenistiisa mise ka laabashadiisa ayaa u adeegeysay qaranka?